Customer တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ Data တွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ? – it4a
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ယုံကြည်ပြီး အမြဲအားပေးမယ့် Customer တွေရှိဖို့ပါပဲ။ Customer ရှိမှသာ လုပ်ငန်းတွေကလည်ပတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီးဆက်လက်တိုးတက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအရေးပါတဲ့ Customer တွေကိုစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာ လက်ရှိ customer (existing customer) ထက် customer အသစ် (new customer) ကိုဆွဲဆောင် တာက ၅ဆပိုမိုကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းက Customer Relationship Management (CRM) လို့ခေါ်တဲ့ ရှိပြီးသား Customer တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ၊ Customer အသစ်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ အစရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအမေးများလာကြပါတယ်။
SAP ရဲ့ Customer Experience Soultion Software (Marketing Cloud, Commerce Cloud, Customer Data Cloud, Sales Cloud, Service Cloud) က ဒီပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Cloud 5ခုလုံးမှာ Customer Data တွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Customer Relation တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Customer တစ်ယောက် Inquiry လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Company ဘက်မှ Marketing သွားဆင်းရာကဖြစ်ဖြစ် စတင်ပြီး Customer Data တွေကိုထည့်သွင်းပြီး Cloud ပေါ်မှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ယင်း Customer ကို အောင်မြင်စွာ Sale Close ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း Customer Data ကို ဆက်လက်အသုံးပြု၍ After Sales Service ကိုအခက်အခဲမရှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Customer Experience Suite မှာရှိတဲ့ Cloud 5ခုလုံးမှာ Data တွေလွယ်လွယ်ကူကူချောချောမွေ့မွေ့စီးဆင်းနေတဲ့အတွက် Company တွေအနေနဲ့ဘယ်လို Benefit တွေကိုရရှိနိုင်လဲ?
Customer Experience Solution ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်-
၁။ Customer တွေရဲ့ Profile တွေ၊ Experiential Data တွေနဲ့ Operational Data တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး Customer များရဲ့လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုနားလည်လာတဲ့အတွက် ယခင်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်၊ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ခြင်း
၂။ ထို့အပြင် Data တွေကိုအသုံးပြုပြီး အလားအလာရှိတဲ့ Customer (Potential Customer) များကိုရွေးချယ်ပြီး အနာဂတ်မှာ အမြဲတမ်း Customer/ Loyal Customer ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
၃။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Customer Experience တွေ၊ Advanced Data Analysis တွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ရာမှာ အကူအညီဖြစ်စေခြင်း အစရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေပါတယ်
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ Customer များကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် SAP Customer Experience Solution ကတော့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ Solution နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ကျွန်တော်တို့ it4a ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
« အာမခံလုပ်ငန်းတွေမှာ Customer Data က ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ? Intelligent Bank တစ်ခုအဖြစ်ကူးပြောင်းဖို့ ဘာတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုမလဲ? »